Budada Raw Raw Tadalafil (171596-29-5) Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshad
Budada Raw Tadalafil ee magaca Cialis waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cillad la'aan (kacsi la'aan) iyo astaamaha qanjirka 'prostatic'
Product Name Budada Tadalafil
Magaca Kiimikada (6R,12aR)-6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methylpyrazino[1′,2′:1,6]pyrido[3,4-b]indole-1,4-dione
Fasalka Daroogada PAH, PDE-5 Ka hortagga; Xakamaynta Fosfodiesterase-5 Enzyme
barafku Psaliid 298-300 ° C
Biological Life-Life saacadood 17.5
SOlubility Ku milma DMSO (78 mg / ml 25 ° C), methanol, biyo (<1 mg / ml at 25 ° C), dichloromethane, iyo ethanol (<1 mg / ml at 25 ° C)
Storage Temperature Ku keydi heerkulka qolka inta u dhexeysa 59 ° F iyo 86 ° F (15 ° C iyo 30 ° C). Ha ku keydin daawadan meelaha qoyan ama qoyan.
Tadalafil Application Kiniiniyada budada xayawaanka Tadalafil, Nacnaca galmada, Qaxwaha, iwm.
Tadalafil, (6R-trans) -6- (1,3-benzodioxol-5-yl) -2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methyl-pyrazino [1 ＇, 2＇: 1,6, 3,4] pyrido [1,4-b] indole-5-dione (Cialis), waa nooc ka mid ah PDE5 inhibitor iyo daawo afka laga qaato. Waa soosaaris b-karboone waana qaab ahaan ka duwan vardenafil (Levitraw) iyo sildenafil (Viagraw), oo labaduba ah PDE171596 inhibitors ku saleysan qaabdhismeedka asaasiga ah ee la isku daray. Budada Tadalafil (CAS 29-5-2003) waxay kordhisaa qulqulka dhiigga ee corpus cavernosum iyadoo la dejinayo muruqyada marinnada dhiigga, tanina waxay awood u siineysaa nin inuu gaaro kacsi. Budada Tadalafil waxaa ogolaaday Mareykanka (US) Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA) XNUMX si loogu daaweeyo cillad (ED), oo adduunka oo dhan looga suuq geeyo magaca Cialis. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu daaweeyo dhiig-karka sambabaha iyo qanjirka 'prostatic hyperplasia', xaalad ah in qanjirka 'prostate' uu weynaado, taasoo dhibaato ku keenta kaadida
Tadalafil astaamaha dawada ee dawada ayaa ah nolosheeda nuska dheer (saacadaha 17.5) marka la barbar dhigo Viagra iyo Levitra (saacadaha 4-5). Noloshan nuska ah ee dheer waxay keentaa waqti dheer oo ficil ah waxayna qayb ahaan masuul ka tahay naanaysta Cialis ee "kiniiniga usbuuca." Noloshan nuska ah ee dheer sidoo kale waxay aasaas u tahay baaritaanka hadda loogu talagalay isticmaalka tadalafil ee dhiig-karka sambabada oo ah daaweyn maalinle ah.
Qalitaanka galmada inta lagu jiro dareenka galmada waxaa lagu gaari karaa nasinta qalitaanada galmada iyo muruqyada maskaxaha isku dhejisan, kaas oo keena in dhiigga kor u kaco orgiga. Niyadjabintan waxay u oggolaaneysaa in dhiiggu kor u kaco marinnada galmada, halka dhiiggu uu buuxiyo laba qol oo gudaha gudihiisa ah oo loo yaqaanno cavernosa. Marka qolalka dhiiggu ka buuxsamo, guska ayaa sii kordhaaya. Sifeynta ayaa soo afjartay marka muruqyada qandaraaska iyo dhiigga la uruuriyay ay ku faafi karaan xididdada galmada.
Jawaabtan waxaa dhexdhexaadin ka ah sii deynta nitric oxide (MAYA) ka soo baxa dareemayaasha dareemayaasha iyo unugyada endothelial, taasoo kicinaysa isku-darka 'cGMP' ee unugyada muruqyada siman ka dibna xakameynaya kala-goynta iyo jarista marinnada dhiigga ee qaada dhiigga guska. Cyclic GMP wuxuu sababa nasasho murqo siman iyo qulqulka dhiigga ee qulqulaya jirka, waxaana hoos u dhigay nooca 'cGMP takhasus gaar ah fosfodiesterase nooca 5 (PDE5) ee corpus cavernosum oo kuyaala agagaarka guska. Tadalafil wuxuu joojiyaa PDE5 oo markaa wuxuu wanaajiyaa isagoo kordhinaya qadarka cGMP ee la heli karo. Tadalafil wuxuu ka joojiyaa PDE5 inuu burburiyo cGMP ka dibna wuxuu kordhiyaa cGMP-ga la heli karo si loo gaaro hawl wuxuuna keenaa in kacsigu sii dheeraado.
Si kastaba ha noqotee, maadaama nolosha nuska ah ee Tadalafil ay yar tahay, saameynteeda ayaa duugeysa inta lagu jiro maalmaha 2 taasoo ka dhigeysa PDE5 inay soo noqoto oo caafimaadkaaga galmada - aad uga sii xumaato. Waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad waqti dheer qaadato si aad uhesho saameynta aad rabto, sida Cialis oo itaal yar 4-5 maalmood 4-5 maalmood.
Dheef la'aan (ED)
Dhiig-qanjirka 'prostatic hyperplasia'
Norepinephrine kor u qaadaha xannibista
Talooyin Tadalafil lagu taliyay
Cialis wuxuu ku yimaadaa kiniinno huruud ah, filim lagu duubay iyo almond-qaabeeya 5, 10 iyo 20 miligram (mg) qiyaaso. Qiyaasta bilowga ah ee lagu taliyay ee budada Cialis si loogu isticmaalo sida loogu baahan yahay bukaanjiifka badankood waa 10 mg, oo la qaaday kahor howlaha galmada ee la filaayo
Qiyaasta ugu horreysa waa miliishiyada 10 (mg) ugu yaraan daqiiqado 30 ka hor inta aan la sameynin ficil galmo. Qaadadu waxay kordhin kartaa x mgka 20 ama waxay hoos u dhigtay mgmaanka 5, oo ku saleysan shaqsiyadeed iyo dulqaad. Hase yeeshee, ugu badnaan waa xajmiga 20 sida hal dose. Jadwalka qiyaasta ugu badan ee lagula taliyay ayaa ah hal mar maalintii bukaanka badankood. waa in aysan aheyn in aan ka badneyn hal qiyaasta saacadaha 24. Bukaanka filaya inay galmo ahaan firfircoon yihiin ugu yaraan laba jeer toddobaadkiiba waxay qaadan karaan qadar maalinle ah oo ah 5 mg, waxaana tani lagu yareyn karaa mgmarka 2.5 mar maalintii, iyadoo ku xiran dareen-celinta shakhsiyeed.
Budada Cialis ee loo isticmaalo sidii loogu baahnaa ayaa la muujiyay si loo wanaajiyo shaqada marka loo barbar dhigo placebo illaa 36 saacadood kadib qaadashada. Sidaa darteed, markii lagala talinayo bukaannada isticmaalka ugu fiican ee budada Cialis, tan waa in la tixgeliyaa.
Waxaa xusid mudan in kacsigu uusan ku dhici doonin kaliya qaadashada kaniiniga. Oo ha u qaadanin Cialis dhiig-bax haddii aad u qaadanayso Adcirca dhiig karka sambabada. Marka laga soo tago, Tadalafil oo loogu talagalay dysfunction waxaa keliya oo loo isticmaali karaa dadka waaweyn oo da'doodu tahay 18 sano iyo wixii ka sareeya.
Powder Budada Tadalafil waxay kaa caawin kartaa nasinta muruqa qanjirka 'prostate' iyo kaadi haysta. Tani waxay kaa caawin kartaa hagaajinta astaamahaaga BPH.
Si loo hagaajiyo astaamaha ED, budada tadalafil waxay caawisaa kordhinta socodka dhiigga ee guska. Tani waxay kaa caawin kartaa inaad kacdo oo kacsanaato. Budada tadalafil si ay kaaga caawiso inaad kacsato, waxaad u baahan tahay inaad galmo kacsato.
P PAH, budada tadalafil waxay u shaqeysaa inay hagaajiso awoodaada jimicsi adiga oo nasinaya xididdada dhiigga ee sanbabadaada. Tani waxay kordhisaa socodka dhiigga.
Marka la raaco saameyntiisa loo baahan yahay, daawadu waxay keeni kartaa waxyeelo aan la rabin. In kasta oo aaney dhammaan saameynada daaweyntu dhici karaan, haddii ay dhacaan waxay u baahan karaan daryeel caafimaad. Fadlan hubi waxyeelooyinka soo socda ee budada tadalafil:
Waxyeellooyinka guud ee caadiga ah
▪ xanuunka dhabarka
▪ Maydhista (maqaarka guduudan)
▪ sanka oo duufsan ama duufsan
Dhibaatooyin halis ah oo culus
Dheecaan dheer oo keeni kara in uu waxyeelo u geysto guska, dhibaatooyinka aragtida, iyo maqal la'aanta.
Haddii saameyntan ay tahay mid khafiif ah, waxaa laga yaabaa inay tagaan maalmo yar ama dhowr toddobaad. Haddii ay aad u daran yihiin ama aadan tagin, la hadal dhakhtarkaaga ama farmashiistaha.
Dadka qaba xaaladdahan soo socda waa inaysan qaadan budada Cialis ilaa dhakhtarku ogolaado:
▲Dhibaatooyinka wadnaha ee wadnaha, angina, ama nooc kasta oo ah wadnaha wadnaha
▲Cadaadiska dhiigga ee sareeya ama hoos u dhaca
▲Qalabka wadnaha ee ku dhaca wadnaha ama istaroogga ee bilihii ugu dambeeyay ee 6, ama infekshanka miyir-beelka ee bilihii ugu dambeeyay ee 3
▲Unugyada unugyada unugyada dhiigga ku dhaca, unugyada multiple myeloma, hemophilia, leukemia, ama cudur kale oo dhiig ah
▲Cudurka beerka ama kelyaha
▲Qaabdhismeedka qaabdhismeedka guska, sida cudurka Peyronie
▲Xaalad kasta oo caafimaad ee lagula taliyay in aysan galmo galmo sameynin
Markaad isticmaasho tadalafil, waxaa jiri kara daroogo kale oo saameyn kara daroogada, taas oo keeni karta saameynaha. Isdhexgalka daroogada ayaa isbedeli kara sida daawooyinkaagu u shaqeeyaan ama u kordhiyaan khatartaada waxyeelo halis ah.
Tadalafil waxay leedahay saameyn isku dhafan oo ku salaysan yaraanta nitrate-ku sababtay cadaadiska dhiigga. Tadalafil waxay sababi kartaa hoos u dhac ku yimaada cadaadiska dhiiggaaga marka loo isticmaalo nitrates, taas oo keeni karta dawakhaad, suuxdin, iyo mararka qaar wadnaha ama istaroogga. Ha isticmaalin tadalafil mid kasta oo ka mid ah kuwan soo socda: Daawooyinka qaarkood oo loo isticmaalo daaweynta xanuunka / angina (nitrates sida nitroglycerin, isosorbide), daawooyinka madadaalada ee loo yaqaan "poppers" oo ay ku jiraan amyl ama nitrite nitrite.
Haddii aad sidoo kale qaadato dawada xayawaanka (sida doxazosin, tamsulosin) si loo daaweeyo qanjidh-ka 'prostate' / BPH ama cadaadis dhiig oo sarreeya, cadaadiska dhiiggaagu wuu yaraan karaa taas oo horseedi karta dawakhaad ama suuxdin. Takhtarkaaga ayaa laga yaabaa inuu bilaabo daaweyn qadar yar oo tadalafil ah ama lagu hagaajiyo dawadaada caagaga ah ee xajinta si loo yareeyo khatarta dhiig kar.
Daraasadaha cisbitaalada, heerarka waxtarka badan ee jawaabta ayaa la soo sheegay ilaa 36 h ka dib markii la bilaabay daroogada. Tadalafil waxaa sida caadiga ah lagu duraa beerka iyadoo la adeegsanayo CYP3A4 hay'adaha aan firfircoonayn ka dhanka ah PDE5 oo inta badan loo yaqaan 'metabolites' ee saxarada iyo kaadida. Farmashiistaha dawooyinka ee tadalafil wax saameyn ah kuma yeelan arrimaha sida qaadashada cuntada iyo aalkolada, da'da, jiritaanka sonkorowga, iyo yaraanta hepatic dhexdhexaad ah ama dhexdhexaad ah. Dhacdooyinka ugu caansan ee laxiriira dawooyinka waa madax xanuun, dhabar xanuun, dyspepsia, iyo myalgia. Qiyaasta 10 iyo 20 mg qiyaasta, Tadalafil wax saameyn weyn ah kuma leh cadaadiska dhiigga iyo garaaca wadnaha mana dhaliso in ay kordhaan xaaladaha myocardial infarction. Warbixinno dhif ah oo ku saabsan dhismeyaal daba dheeraaday oo ka weyn 4 h iyo 'kadifaaca' ayaa lagu xusay isticmaalka tadalafil. Firfircoonaanta, haddii aan si habboon loo daaweyn, waxay ku dambayn kartaa waxyeelo aan laga beddeli karin unugyada. Bukaanka leh kacsanaan waara oo ka weyn 4 h ayaa lagula talinayaa inay raadsadaan daryeel caafimaad oo degdeg ah. Bukaanka sokorowga, kor u qaadida shaqada by tadalafil waa iyadoo aan loo eegin nooca cudurka macaanka iyo nooca daaweynta sonkorowga.
Daawooyinka kale waxay saameyn karaan ka saarista tadalafil jirkaada, taas oo saameyn karta sida tadalafil u shaqeeyo. Tusaale ahaan waxaa ka mid ah antibungal (azraxonazole, ketoconazole), antibiotics macrolide (sida cadithromycin, erythromycin), qufacaanka HIV protease (sida fosamprenavir, ritonavir), hepatitis C virus protease inhibitor (sida boceprevir, telaprevir), rifampin, iyo kuwa kale .
Ha u qaadan dawadan waxkastoo kale oo ay kujiraan kor u kaca kor u kaca ama dawooyinka kale ee la midka ah ee loo isticmaalo daweynta dysfunction-ED ama dhiig karka (sida sildenafil, vardenafil).
Marka laga hadlayo daaweynta tadalafil oo kale daawooyinka kale ayaa weli leh wax badan, haddii aad rabto inaad isticmaasho daroogada leh budada tadalafil (CAS 171596-29-5), marka hore xusuuso inaad dhakhtarkaaga la tashato oo wuxuu ku siin doonaa talo xirfad leh oo la isku halleyn karo.
Budada Tadalafil, budada sildenafil, iyo budada vardenafil dhamaantood waxay ku dhaqmaan iyagoo xakameynaya PDE5 enzyme, laakiin daawooyinkani waxay sidoo kale xakameynayaan PDE enzymes 6, 1, iyo 11 heerar kala duwan. Tusaale ahaan, Sildenafil iyo vardenafil waxay xakameeyaan PDE6, enzyme laga helo isha, in ka badan tadalafil. Qaar ka mid ah dadka isticmaala 'sildenafil' waxay arkaan nabar buluug ah waxayna leeyihiin feejignaan sare xagga iftiinka sababtoo ah ka hortagga PDE6. Ka sokow, Sildenafil iyo vardenafil ayaa sidoo kale xakameynaya PDE1 in ka badan tadalafil. PDE1 waxaa laga helaa maskaxda, wadnaha, iyo muruqyada jilicsan ee xididdada dhiigga. Waxaa loo maleynayaa in xakamaynta PDE1 ee sildenafil iyo vardenafil ay horseedo vasodilation, flushing, iyo tachycardia.
Marka loo barbardhigo waxqabadka PDE6 iyo PDE1, tadalafil wuxuu si aad ah u abuurnaa PDE11. PDE11 waxaa lagu muujiyay muruqa qalfoofka, prostate, beerka, kalyaha, qanjirka pituitary, iyo baaritaanka. Si kastaba ha noqotee, saameynta jidhka ee ka hortagga PDE11 lama yaqaan.